ကျားသစ်ကွက်တောကြောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကျားသစ်ကွက်တောကြောင်၏ သိပ္ပံအမည်မှာ လီယိုပါဒတ် ပါဒါလစ် ဖြစ်သည်။ ကြောင်ရိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်တောင်ပိုင်း၊ မက္ကဆီကို၊ ဗဟိုအမေရိကနှင့် တောင်အမေရိကတို့တွင် တွေ့ရသည်။ အမေရိ ကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ယင်းတို့ကို တက္ကဆက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် အရီဇိုးနားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ 
မျိုးစိတ် L. pardalis
၂ တွေ့ရှိရာဒေသနှင့် ပျံ့နှံ့ကျက်စားခြင်း
ကျားသစ်ကွက်တောကြောင် (ခ) တောင်အမေရိက တောကြောင် (Ocelot) ၏အသွင်သဏ္ဌာန်မှာ အိမ်မွေးကြောင်နှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ အပြင်က အရေခွံကသာ ကျားသစ်တစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်း အဆင်းကြောင်းနှင့် ထင်သာမြင်သာ ရှိစေသွားသည်။ အိုဆီလော့ (The ocelot) ဟုခေါ်ပြီး Dwarf leopard (ကျားသစ်ပု/တောကြောင်ပု) ဟူ၍လည်း ခေါ်တွင်သည်။ အရွယ် အစားအားဖြင့် ၂၇ ကနေ ၃၉ လက်မကြား အထိ အရှည်ရှိပြီး အသက် ၂၀ တန်းအထိ နေနိုင်သည်။ ဖား၊ ယုန်၊ ပုတက်၊ ငါး၊ ဖွတ်၊ ငှက်တို့ကဲ့သို့သော သားကောင်အသေးစားများကိုသာ အမဲလိုက်ဖမ်းဆီး စားသောက်နိုင်သည်။
ကျားသစ်ကွက်တောကြောင်ကို တောင်အမေရိကတိုက်တစ်ခုလုံးတွင် တွေ့ရ သည်။ မာဂရီတားကျွန်းနှင့် ထရီနီဒက်ကျွန်းတို့တွင်လည်း တွေ့ရသည်။ ယင်းအပြင် ဗဟိုအမေရိက၊ မက္ကဆီကိုနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းတို့ တွင်လည်း တွေ့ရသည်။ ကျားသစ်ကွက်တောကြောင်ကို တွေ့ရသော နိုင်ငံများမှာ အာဂျင်တီးနား၊ ဘလိဇ့်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကော်စတာရီကာ၊ အီကွေဒေါ၊ အယ်လ်ဆာဗေဒို၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဂိုင်ယာနာ၊ ဟွန်ဒူရပ်စ်၊ မက္ကဆီကို၊ နီကာရာဂွာ၊ ပနားမား၊ ပါရာဂွေး၊ ပီရူး၊ ဆူရီနမ်၊ ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဗင်နီဇွဲလားတို့ ဖြစ်သည်။ ဥရုဂွေးနိုင်ငံတွင်မူ မျိုးပြုန်းတီးပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဟု ယူဆရသည်။ 
ကျားသစ်ကွက်တောကြောင်၏ အပြင်အရေခွံသည် ကမ္ဘာ့ ဈေးကြီး သားရေအမျိုးအစားထဲတွင် ပါဝင်သောကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အမဲလိုက်အဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရသော တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်သည်။ အိမ်မွေးအနေနှင့်လည်း ဈေးကြီးပေး အိမ်မွေးတဲ့ အလေ့အထလည်း ရှိပါသေးသည်။
ထို့ကြောင့် ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ စ၍ ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံး တိရစ္ဆာန်၊ မထိခိုက်ရ တိရစ္ဆာန်အဖြစ် ယနေ့တိုင် သတ်မှတ်ထား သည်။
↑ Paviolo, A.; Crawshaw, P.; Caso, A.; de Oliveira, T.; Lopez-Gonzalez, C.A.; Kelly, M.; De Angelo, C. & Payan, E. (2015). "Leopardus pardalis". IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-3. International Union for Conservation of Nature. doi:10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T11509A50653476.en
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျားသစ်ကွက်တောကြောင်&oldid=701201" မှ ရယူရန်
၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။